Taliye ku xigeenkii hore ee booliiska Puntland oo loo magacaabay taliyaha la dagaalanka argagixisada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliye ku xigeenkii hore ee booliiska Puntland oo loo magacaabay taliyaha la dagaalanka argagixisada
Taliye ku xigeenkii hore ee booliiska Puntland oo loo magacaabay taliyaha la dagaalanka argagixisada
November 15, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taliyaha cusub ee la dagaalanka argagixisada, Janaraal Muxiyadiin Axmed Muuse. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada booliiska Puntland Janaraal Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa loo doortay taliyaha la dagaalanka argagixisada, sida lagu sheegay digreeto uu arkay warsidaha Puntland Mirror oo kasoo baxday madaxtooyada Puntland 6-dii bishaan November.
Taliyaha cusub ayaa shaqadiisu noqon doontaa ka hortaga weerarada argagixisada iyo howlaha xagjireynta ah, sida ay sheegayaan ilo-wareedyada.
Janaraal Muxiyadiin ayaa ah nin ciidan ah oo adag, bartamihii bishii Maarso, waxa uu hoggaaminayay dagaalkii deegaanada Suuj iyo Garmaal ee gobolka Nugaal ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Booskan taliyaha la dagaalanka argagixisada ayaa ah mid uu hadda sameeyay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali, sida uu ogaaday warsidaha Puntland Mirror.
March 6, 2017 Kooxo hubaysan oo aan haybtooda la aqoon oo nin ganacsade ah ku dilay magaalada Boosaaso
Maxkamad Masar ah oo tuurtay xukunka toogashada ah ee madaxweynihii hore awooda laga tuuray Maxamed Mursi
Garowe-(Puntland Mirror) Medicine seller Faysal Ahmed Warsame also known as “Faysal Qaran” on Thursday was elected chairman of the Puntland Non-State Actors Association (PUNSAA). Qaran received 54 votes while his competitor and former chairman Nour [...]
Ciidamada Ciraaq oo ku sii siqaya meeshii ugu dambeysay ee Daacish ay ka heysatay galbeedka magaalada Mowsil
Mowsil-(Puntland Mirror) Ciidamada Ciraaq ayaa ku sii siqaya meeshii ugu dambeysay ee Daacish ay ka heysatay galbeedka magaalada Mowsil, sida uu sheegay taliye Ciraaqi ah. “Ciidamada huwanta ah waxay saakaydii hore u dhaqaaqeen sidii ay [...]